Ukubaluleka kokungenisa umoya kahle ekhaya lakho | Bezzia
Ukubaluleka kokungenisa umoya kahle ekhaya
UPau Heidemeyer | 01/05/2021 16:00 | Kubuyekezwe ku- 28/04/2021 16:47 | Ikhaya
Yiba umoya omncane ekhaya kuyisihluthulelo sokuba yikhaya elinempilo. Ingabe uvame ukuphefumula kaningi? Kubalulekile ukuthi ukwenze njalo, ukunciphisa izinto ezingcolisayo.
Ukuphefumula okunganele emakhaya kuyakwazi ukukhiqiza ukwanda kwamagciwane, ukwanda okukhulu kwezinto eziyingozi empilweni, njengezinhlayiya zomswakama, amabhaktheriya angenzeka avela ezinweleni zezilwane, i-carbon monoxide, noma i-carbon dioxide.
Uma ikhaya lingenamoya omuhle, lokhu kungaphazamisa impilo yabantu. Phakathi kwezinye izimpawu, ikhanda elibuhlungu, izinkinga zokuphefumula noma izinkinga zokulala ziyanda, lezi ngezinye zezibonelo zemiphumela yokungangenisi umoya endlini.
Endlini ene umoya owanele, kuncane kakhulu ukulawula umswakama wendlu, ukuqedwa kwezibungu, izinhlayiya zothuli, Kuzoqedwa nephunga elibi futhi ngenxa yalowo mshini omusha we-oxygen, uzokwazi ukwandisa ukusakazwa komoya.
1 Ngale ndlela uzokwazi ukuthi unomoya owanele yini endlini yakho
2 Lezi izinzuzo zokugcina umoya omncane ekhaya
3 Le yimiphumela yokungangeni komoya omuhle ekhaya
4 Le yindlela othola ngayo ikhwalithi yomoya engcono ekhaya
5 Ungayifaka kanjani umoya ekhaya
5.1 Ukuphefumula kwemvelo
5.2 Ukupholisa umoya
5.3 Ukungena komoya okuphoqelelwe
5.4 Sebenzisa abalandeli
5.5 Umkhawulo wabantu ngaphakathi endlini
Ngale ndlela uzokwazi ukuthi unomoya owanele yini endlini yakho
Kubalulekile ukwenza umkhuba wokungenisa indlu nsuku zonke, kwesinye isikhathi sikholwa ukuthi senza konke okusemandleni ukuthi sibe nekhaya elinempilo, noma kunjalo, kungenzeka ukuthi asikwenzi ngendlela esicabanga ngayo. Ukwazi ukuthi ikhaya lakho linomoya ongena kahle yini, kuzokwanela ukulandela uchungechunge lweziqondiso.
Indlu yakho kungenzeka ayinayo umoya owanele, ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukusebenzisa i-extractor yasekhishini noma kwezinye izimo asinayo i-extractor endlini yokugezela ukusisiza ukuba sinikeze umoya igumbi. Uma ungenayo ifeni yokukhipha umoya yokuhlanza umoya, kufanele okungenani uvule amawindi kabili ngosuku.
Ngakolunye uhlangothi, uma unquma ukubhema ngaphakathi endlini, kungakhuphula ukuqoqwa kwezinhlayiya ezinobuthi, okwenza impilo yabantu abahlala ndawonye ibe yimbi kakhulu.
Lezi izinzuzo zokugcina umoya omncane ekhaya
Ikhaya kufanele lingeniswe umoya kahle ukuze ukusakazwa komoya kube kuhle kakhulu. Ukuze lokhu kwenzeke, kuhle ukuphefumula umoya ekuseni nasezinsukwini zonke. Yini enye, zama ukuthi kukhona okukhona manje endlini yakhoUma kungenzeka, dala okusalungiswa ngokuvula amawindi kuzindlela zombili.
Ngokufaka umoya imizuzu eyi-10 ngosuku, uzothola indlu yakho ibe nezinzuzo ezinkulu, njengalezo ezichazwe ngezansi.
Nciphisa ukungezwani komzimba.
La i-oxygenation ukususwa komoya ne-carbon dioxide.
ukulawulwa kwe- umswakama.
Uzosusa Los iphunga elibi nomoya oshajiwe.
Uzothola uphumule kangcono ngoba indlu izobe ingenisa umoya futhi ihlanzekile.
Le yimiphumela yokungangeni komoya omuhle ekhaya
Ekhaya, kufanele kubhekwe umoya umoya njalo ukuvimbela umoya ukuthi ungaphefumuli futhi uhlale uhlala ngaphakathi. Ukunethezeka nenhlala-kahle yabantu abahlala ndawonye incike ekubeni nomoya omusha futhi ovuselelwe nsuku zonke.
Umusi owenziwa lapho upheka, lapho ugeza, uma sisebenzisa ukufudumeza okuhambisana nokungenisa kahle umoya, kungadala ukushoda komoya-mpilo omncane, kepha akubandakanyi ukulimala empilweni.
Le nduduzo yalabo abahlala ekhaya, kufanele ibekezelele ngalesi sizathu, umoya omncane kufanele wenziwe njalo futhi nsuku zonke ngezikhathi ezithile. Ukungabi nayo indlu enomoya omuhle owanele, kuhlotshaniswa nengcindezi nezimo ezithile zokuphefumula.
Le yindlela othola ngayo ikhwalithi yomoya engcono ekhaya
Kufanele sihlukanise isici esibalulekile, ngoba ngezikhathi zasebusika, izinhlelo zokushisa zingasetshenziswa njalo futhi zome imvelo kakhulu.
Lokhu kungakhokhelwa ngokusebenzisa izihlungi ezithile. nokunxenxa inqubo yokuphefumula komoya engokwemvelo, esiyishilo ngaphambili.
Ukuze indlu isebenze ngokungenisa umoya okwanele nasezinyangeni zasehlobo, okunconywayo ukulawula ukusetshenziswa kwezinto zikagesi, ugwema izibani ezivela ekushiseni okuningi, faka ifenisha yokhuni oluqinile bese ubeka izitshalo ezivumela ukwehlukanisa ukushisa.
Ungayifaka kanjani umoya ekhaya
Ngokulandelayo sizokunikeza okhiye abathile ukuze uvule umoya wekhaya lakho ngamasu amathathu ahlukene ongawasebenzisa namuhla.
Kuyadingeka ukuvuselela umoya ngokuvula amawindi ukuze gwema ukufinyela komoya endlini. Kwenziwa ngokuvula amafasitela kuphela.
Faka umoya nasemakamelweni kubalulekile ukususa umswakama ekhiqizwa ebusuku ngokuphefumula, ungafaka umoya okungenani imizuzu engama-30.
Lo mkhuba omuhle kakhulu wokungenisa umoya emakhaya, okufanele ukwenze ukuvula amafasitela amabili ezindaweni ezimbili ezingafani yendlu ukuze kukhiqizwe umoya wangaphakathi wangaphakathi ovuselela umoya-mpilo ngokushesha nangempumelelo.
Ukungena komoya okuphoqelelwe
Lolu hlobo umoya omncane kwehlukile ngoba:
Kwenziwa ngenxa ye- izakhi zemishini.
Ungenza umphumela woshimula ukuze umoya oshisayo ukhuphuke nomoya obandayo wehle.
Sebenzisa amafasitela angangeni moyaLokhu kufanele kuvumele ubuncane bokushintshana komoya ukuqinisekisa impilo nekhwalithi yomoya wasendlini.
Enye indlela yokungenisa umoya ekhaya lakho kungabalandeli, abasisiza ukuthi sijikeleze umoya ngendlela engcono. Ukuze uzuze umoya ongcono kakhulu, ungenza lezi zinyathelo:
Beka isithandwa eduze kwewindi elivulekile ngangokunokwenzeka, ukhombe ngasewindini. Lokhu kuvumela izinhlayiya ezihlala ngaphakathi ekhaya ukuba ziphume ngokuphumelelayo.
Ungakhombi abalandeli kwabanye abantu, ngoba lokho kungadala ukuthi umoya ongcolile uqonde kubo ngqo.
Ekugcineni, sincoma sebenzisa isilingi abalandeli lokho kukusiza ukuthi uthuthukise ukujikeleza komoya ekhaya, kungakhathalekile ukuthi amawindi avuliwe noma cha.
Umkhawulo wabantu ngaphakathi endlini
Enye indlela yokufaka umoya ophefumulayo ekhaya lakho, noma wokuqinisekisa ukuthi ayivuseleli izinhlayiya eziningi ezingathandeki namagciwane, kungukunciphisa inani labantu abasesikhala esifanayo nangesikhathi esithile ekhaya lakho. Ngakho-ke, sincoma ukuthi ulandele le mihlahlandlela:
Nciphisa inani labantu abavakashela ikhaya lakho.
Hlangana ezindaweni ezinkulu kakhulu futhi ezivulekile kakhulu, ukuze ukwazi ukugcina ibanga elide ngangokunokwenzeka.
Qiniseka ukuthi ukuvakasha kufushane ngangokunokwenzeka.
Ngemuva kokuvakasha, ungakhohlwa ukufaka umoya.
Konke lokhu kuzosiza ikhwalithi yomoya ekhaya lakho ukuthi ihlale izinzile futhi ngaphezu kwakho konke, iphilile. Ungakhohlwa ukufaka umoya endlini yakho ekuseni okungenani isigamu sehora ukuze ukwazi ukuphefumula umoya omusha.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukubaluleka kokungenisa umoya kahle ekhaya